Wararka - Hebei Tomato 2019 waxqabadyada dhismaha kooxeed
Waxqabadyada kooxeed ee Hebei 2019
Yaanyada Hebei waxay abaabushay waxqabadyadii ugu badnaa ee koox dhisida sanadka laga bilaabo Ogosto 9 ilaa 13, 2019.
Si loo kobciyo waqtiga firaaqada shaqaalaha, loo yareeyo cadaadiska shaqada, loo xoojiyo isgaarsiinta iyo xiriirka ka dhexeeya shaqaalaha, in la xoojiyo isku xirnaanshaha kooxda iyo awoodda dhexe, iyo in la abaabulo waxqabad dhisme kooxeed aan la ilaawi karin oo ka socda Hebei Tomato.
Maalintii ugu horeysay, duulimaadka ayaa dib u dhacay cimilada darteed. Nasiib wanaagse, waxaan ku nimid si habsami leh.
Maalintii labaad, waxaannu qaadnay baabuurkii waddada ka baxsanaa ee dhex marnay dhul-beereedka Hulunbeier oo aan cidna lahayn, waxaannu gaadhnay meelaha dhaadheer ee laga amro Webiga Mozhgrad, oo waxaan dhadhaminnay "Siddeeddii Xisbi ee Iiddii" oo loogu talo galay Dabaaldegga iyo Siddeed Fortune. Galabnimadii, waxaan booqday Erguna National Wetland, anigoo maraya Jasiiradda Black Forest, kaynta duurjoogta ah, keynta eucalyptus, jasiiradda shimbiraha, Kang Street, badda ubaxa qoyan iyo muuqaallo kale oo qurux badan. Webiga xididkiisu hooseeyo si deggan buu u socdaa, biyaha qalooca wuxuu ku wareegsan yahay seeraha iyo xeebta. Dhirta ayaa ah geed iyo cagaar. Imaanshaha Genhe fiidkii oo dhadhamso hilibka takhasuska gaarka ah ee maxalliga ah. Cunto buuxda kadib, kusii fadhi qolka aad sugaysay.
Maalintii seddexaad, waxaan markii ugu horreysay booqannay Beerta Lulu Guya Reindeer Park, oo loogu yeero "qabiilkii ugaarsiga ugu dambeeyay" ee Shiinaha. Waa waddanka kaliya ee Shiinaha ka tirsan ee kiciya deerada. Waxay timaaddaa Sahuan Ranch duhurkii, waxay dhex socotaa keynta bjchrk, waxayna u gudubtaa Montenegro fiidkii si ay u soo marto fuushan fardaha. Madadaalo, xafladda dab-demiska fiidkii, ku raaxee dhadhanka ido dhan oo la dubay, ku noolow yurt, waxaad la kulantaa waxqabadyada xiisaha leh qaabka Mongolian.
Maalintii afraad, webiga Erguna ee buluugga ah ee fidsan, waxaan ku soconnay waddada xuduudda Shiinaha iyo Ruushka. Muuqaalka quruxda badan ee jidka ku haray wuxuu yareeyay culeyska shaqaalaha. Dhul-daaqsimeedka baaxadda leh ayaa laabta sii ballaadhiyey isla markaana kor u qaaday wada-jirkeenna Fiidka Manzhouli, ku raaxee muuqaallada quruxda badan ee habeenkii.
Maalintii shanaad, wuxuu booqday tartanka fardaha ee qabiilka Mongolia ee Balhu, wuxuuna dhammeeyay fiidkii fiidkii.
Iyada oo loo marayo waxqabadka kooxdan, wadajirka shaqaalaha iyo waxtarkooda dagaalka ayaa la sii qoto dheeraaday, xiriirka istiraatiijiyadeed ee ka dhexeeyana waa la sii qotooday. Isfahamka labada dhinac waa la wanaajiyay, dareenka waa la isu soo dhawaaday, qof walbana wuxuu ku dhex milmay xaalad wanaagsan iyo xamaasad sare. Shaqada mustaqbalka, waxaan xoojinay kalsoonideena iyo go'aankeena si loo xoojiyo Hebei Temet.